Ngalaba na Ọzụzụ na Mmụta
En Nhazi na ọmụmụ ihe Anyị na-emeso ọtụtụ isiokwu metụtara agụmakwụkwọ na ebumnuche nke inyere gị aka na usoro ọzụzụ gị iji chọta ụzọ ọrụ ụwa. N’okpuru, ị ga - ahụ isiokwu niile anyị meworo n’oge a niile anyị na weebụsaịtị a nọ. Anyị nwere ngalaba mmegide, nke ị ga - achọta ozi zuru oke na emelitere na ọtụtụ ngalaba dị iche iche.
Anyị nwekwara ngalaba akụkọ, yana asọmpi kachasị ọhụrụ na mmemme ndị nwere ike ịmasị gị, yana akụkọ kachasị ọhụrụ banyere ọzụzụ, nke ihe ịtụnanya anyị dere. otu ederede. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe pụrụ iche ma ị nweghị ike ịchọta ya ebe a, ịnwere ike iji njin ọchụchọ ahụ.
Studylọ Ọrụ Ọmụmụ
Ebube na mmata
Ndị agha nchekwa obodo na-emegide ya
Mmegide nke ndị nkuzi
Ọchịchị nke Mpaghara Ọchịchị
Mmegide Ndị Nche Obodo
Mmegide Ikpe Ziri Ezi
Mmegide Ndị Ọrụ
Mmegide ndị uwe ojii mpaghara
Mmegide ndị uwe ojii mba
Ndị mmegide EU
Nzukọ ụmụ akwụkwọ na obodo
Ngwa na ọzụzụ